६ वर्षमा ५५ हजार दुर्घटना, ११ हजार ८३४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर करिब २८ लाख सवारी साधन दर्ता छन् । तर, २५ लाखले मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस पाँचथरको उमेदवारी टुङ्ग्यो
सिंहलिला समाचार, पाँचथर÷ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि नेपाली काँग्रेसले पाँचथर सहित ७ जिल्लाको उमेदवारी टुङ्ग्याउको छ ।
प्रहरीद्वारा बन्धक बनाएर असुली
१ कात्तिक, काठमाडौं । गंगा देवान भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ना हुन चाहने युवालाई सहजीकरणको काम गर्थे । उनले राम्रै पैसा कमाइरहेका थिए । सो कुरा स्थानीय विनोद थापाले चाल पाए ।
अनेमसंघले चुनाव प्रचार प्रसार कमिटी बनायो
सिंहलिला समाचार, असोज २९,पाँचथर। अनेम संघ पाँचथरले ५ सय ५५ जनाको चुनाव प्रचार प्रसार समिति शनिवार गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको प्रश्नः मन्त्रीहरुकै जुलुस लिएर चुनाव गर्नु हुन्छ ?
२८ असोज, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीसामू थप मन्त्री किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । अझै समय रहेको भन्दै उनले प्रस्तावित मन्त्रीहरुको नाम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।
गुन्डा नाइकेका रुपमा चिनिएका मनाङे पनि उम्मेदवारमा सिफारिस, कानुन के भन्छ ?
लमजुङ : गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई एमाले मनाङले प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।
टिकट माग्न आउने कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन: ढुक्क हुनोस तपाईले नपाए तपाइ भन्दा योग्य र लोकप्रिय नेताले टिकट पाउछ
सिंहलिला समाचार, काठमाडौं, असोज २६ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले चाहेका ब्यक्तिले नै उम्मेदवारी पाउने प्रष्ट पार्नुभएको छ । क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी र जनसंगठनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिफारिशमा परी टिकट
सरदकुमार हत्याको विरोधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, ठूला आयोजनाको काम रोकियो
सिंहलिला समाचार २५ असोज, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष सरदकुमार गौचनको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कार्वाही गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ ।
दिल्लीको बढ्दो दिलको गती र चिनियाँ ' साइलेन्स डिप्लोमेसी '
काठमाडौं। दशैं अघी व्ययसायिक कामको सिलसिलामा भारत भ्रमणमा रहेका एक नेपाली उद्यमीले भारतीय सत्तारुढ दलका एक नेतासँगको भेटको प्रसङग सुनाउँदै भनेका थिए, 'उनीहरुलाई त कोमल ओली राप्रपा छोडेर एमालेमा जाँदै छिन भन्ने पनि थाहा रहेछ।'
तिन दर्जन राप्रपाका नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश
पाँचथर सिंहलिला समाचार ÷फिदिम नगरपालिका वडा नं. ९ लुम्फाबुङका तिन दर्जन बढी राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरु आज नेकपा एमालेमा प्रबेश गरेका छन् ।